३ दिनदेखि हराएकी बालिका मृत फेला, बलात्कारपछि हत्या गरेको आशंका – Waikhari
३. बाणगंगामा एक युवकको हत्या, हातखुटटा बाधिएको अवस्थामा फेला
४. ३५ दिनभित्र सिके राउत अदालतमा हाजिर हुनुपर्ने
५. प्रगति टोल आमा समुह ठाकुरापुरद्वारा झुगां दुर्गा मन्दिरलाई आर्थिक सहयोग
७. कपिलवस्तुका पत्रकार नन्दराम पौडेलको सवारी दुर्घटनामा मृत्यु
गृहपृष्ठ खबर ३ दिनदेखि हराएकी बालिका मृत फेला, बलात्कारपछि हत्या गरेको आशंका
३ दिनदेखि हराएकी बालिका मृत फेला, बलात्कारपछि हत्या गरेको आशंका
मुगु : जिल्लाको उत्तरी सोरु गाउँपालिमा–९ की एक बालिका मृत फेला परेकी छन्। शनिबारदेखि हराएकी बालिका लक्ष्मी चौलागाईं तीन दिनपछि मुगु कर्णालीमा मृत भेटिएकी हुन्। ​सोरु गाउँपालिका–९ की ९ वर्षीया बालिका सोही गाँउपालिका–८ तारापानीबाट हराएकी जानकारी परिवारले प्रहरीलाई दिएको थियो।
प्रहरी र स्थानीयले खोजतलास गर्दा पनि फेला परेकी थिइनन्। सोमबार माछा मार्न गएका स्थानीयले लक्ष्मीको शव सोरु–८ मुगु कर्णालीको घाट भन्ने स्थानमा भेटेका थिए।
सोरु गाँउपालिका—९ कालै स्थायी ठेगान भएकी चौलागाईंको परिवपार केही समयदेखि तारापानी बस्दै आएका छन्। शनिबार तारापानीको घरनजिकै खेलिरहेकी लक्ष्मी हराएकी थिइन्। सोरु–८ का दानबहादुर शाहीले उनको शव फेला पारिएको जानकारी दिएका हुन्।
शव भएको ठाउँमा चाउचाउ भेटियो
शव भेटिएको स्थानभन्दा केही मिटरमाथि खाएर आधा बाँकी भएको चाउचाउको प्याकेट र सिंगो अर्को प्याकेट पनि भेटिएको छ। उक्त स्थानको प्रकृति हेर्दा बालिकालाई कसैले ललाई फकाई गदै घरबाट टाढा लगी कुनै अनैतिक प्रयास गरी हत्या गरेर नदीमा फालेको हुन सक्ने बालिकाका दाई नाता पर्ने धर्मराज शाहीले भने।
लास फेला पारेको स्थानभन्दा केही मिटरयता भेटिएका चाउचाउका प्याकेटबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा तारापानी सीप बजारमा दुई जना मात्र चाउचाउ व्यापारी भएको र शनिबार साँझ बालिकाको घर नजिकका छिमेकीले चाउचाउ लिएको खुल्न आएको छ।
उक्त घटना शंकास्पद भएको भन्दै एक जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको जिल्ला कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक नरेश विकले जानकारी दिए।
विकका अनुसार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका युवाले आफू शनिबार मादक पदार्थ सेवन गरेको, लक्ष्मीलाई बहिनी सम्झेर चाउचाउ दिँदा जडिया भनेर जिस्काएपछि लखेटेको र लडेर नदीमा परेको बयान दिएका छन्। तर आफूले कुनै अनैतिक प्रयास नगरेको पनि प्रहरीसमक्ष उनले बताएका छन्। उनलाई हिरासतमा राखी अनुसन्धान थालिएको प्रहरीको भनाइ छ।
पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएपछि लक्ष्मीको मृत्युबारे थप जानकारी प्राप्त हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरिक्षक चित्रबहादुर भट्टराईले बताएका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत सुरु
बझाङमा ११ वर्षीया बालकले गरे आत्महत्या
प्राधिकरणले एक वर्षभित्र यी ५० ठाउँमा बनाउँदै छ चार्जिङ स्टेसन
२४ घण्टामा ५३४ मा कोरोना संक्रमण, ५ जनाको मृत्यु
सशस्त्र प्रहरी बल कृष्णनगरद्वारा लाखौँको पटका नष्ट
बुटवल सडक मानवमुक्त उपमहानगर घोषणा
पौडी खेलाडी गौरिका सिंहले जितिन् तेस्रो स्वर्ण
कुर्सीमा टाँस्सिरहने ओलीको तृष्णाले मुलुकमा जटिलता आयो- घनश्याम भुसाल